Soosaarayaasha Maaskarada iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ee la tuuri karo - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Ilaalinta > Maaskaro la tuuri karo
Maaskarada la tuuri karo waxay ka samaysan yihiin in ka badan saddex lakab oo ah 28 garaam oo dhar aan tol lahayn; Buundada sanku waxay qabataa xariijimo balaastiig ah oo saaxiibtinimo leh, iyada oo aan lahayn wax bir ah, oo leh neefta, raaxada, gaar ahaan ku habboon warshadaha elektiroonigga ah iyo nolol maalmeedka. Maaskarada la tuuri karo (maaskarada qalliinka) waxay ka hortagi karaan caabuqyada neef-mareenka ilaa xad, laakiin kama hortegi karto qiiqa. Markaad iibsanayso maaskaro, waa inaad doorataa maaskaro si cad loogu calaamadiyay "mask qaliinka caafimaadka" ee xirmada.
Maaskaro saddex-lakab ah oo la tuuri karo waxay ka samaysan yihiin laba lakab oo dhar aan tol lahayn iyo warqad shaandhaysa. Maaskarada saddexda lakab ah ee la tuuri karo ayaa ka samaysan laba lakab oo maro fibre ah oo aan tolnayn, taas oo loo isticmaalo daawaynta iyo caafimaadka, lakabka maro buufinta shaandhada oo 99% ka badan adkaysi u leh bakteeriyada ayaa lagu daraa dhexda oo alxan. by mawjada ultrasonic. Buundada sanku waxa ay ka samaysan tahay xariijimo balaastik ah oo deegaanka u fiican, taas oo aan ku jirin wax bir ah oo ay ku rakiban tahay qulqulka uumiga, taas oo ah mid raaxo leh. Saamaynta shaandhaynta ilaa 99% B.F.E waxay si gaar ah ugu habboon tahay warshadaha elektiroonigga ah; Maaskarada kaarboonka ee firfircoon ee la tuuri karo waxay ka samaysan yihiin 28 garaam oo dhar aan tol lahayn oo korka saaran, lakabka kowaad ee dhexda waxaa lagu sifeeyaa warqad lidka bakteeriyada, taas oo 99% adkaysi u leh bakteeriyada. Waxay ka ciyaartaa doorka ka hortagga bakteeriyada waxayna ka hortagtaa waxyeelada fayraska. Dhexdhexaadinta lakabka labaad ayaa laga sameeyay qalab cusub oo wax ku ool ah iyo sifeynta - fiber carbon firfircoon, maro kaarboon firfircoon, oo leh gaas ka hortag ah, deodorant, filter bakteeriyada, boodhka iyo saamaynta kale.
Faa'iidooyinka: Hawo-qaadista Maaskarada La Tuuri karo waa mid aad u wanaagsan; Sifeyn kara gaasaska sunta ah; Ilaalinta kulaylka kara; U nuugi kara biyaha; Biyo ma galeen; Miisaanka; Ma jahawareerka; Wuxuu dareemayaa mid aad u fiican oo jilicsan; Marka la barbardhigo maaskaro kale, qaab-dhismeedku waa mid fudud; Aad u jilicsan, waa la dhimi karaa ka dib kala bixinta; Isbarbardhigga qiimaha hooseeya, oo ku habboon wax soo saarka ballaaran;
Khasaaro: Marka la barbar dhigo waji-xidhaha dharka kale, Maaskarada la tuuri karo lama nadiifin karo; Sababtoo ah faybarkiisu wuxuu u habeeyaa jiho gaar ah, markaa way fududahay in la jeexjeexo; Marka la barbardhigo waji-xidhaha kale ee dunta, Maaskarada la tuuri karo ayaa ka xoog yar oo ka adkaysanaysa waji-xidhaha kale.
Maaskaro weji oo daabacan
Maaskaro Waji oo Daabacan ayaa ka kooban lakabka sare, lakabka dhexe, lakabka hoose, suunka maaskaro iyo fiilada sanka. Maaddada dusha sare waa maro spunbonded polypropylene, walxaha lakabka dhexe waa polypropylene dhalaalaysa-afuufay maro filter ka samaysan polypropylene spinneret, alaabta hoose waa maro spunbonded polypropylene, suunka maaskaro waxaa lagu toleeyey by dun polyester iyo qadar yar oo dun spandex ah, iyo duubka sanku wuxuu ka samaysan yahay polypropylene oo la foorarsan karo oo qaabaysan karo.
Maaskarada marada boodhka ah
Maaskarada marada boodhka waxay ka kooban tahay lakabka sare, lakabka dhexe, lakabka hoose, suunka maaskaro iyo fiilada sanka. Maaddada dusha sare waa maro spunbonded polypropylene, walxaha lakabka dhexe waa polypropylene dhalaalaysa-afuufay maro filter ka samaysan polypropylene spinneret, alaabta hoose waa maro spunbonded polypropylene, suunka maaskaro waxaa lagu toleeyey by dun polyester iyo qadar yar oo dun spandex ah, iyo duubka sanku wuxuu ka samaysan yahay polypropylene oo la foorarsan karo oo qaabaysan karo.
Maaskarada Qalliinka ee Carruurta ee Daawada la Tuuri karo
Maaskarada Qalliinka ee Carruurta ee Daawada la tuuri karo ayaa ka kooban lakabka sare, lakabka dhexe, lakabka hoose, suunka maaskaro iyo fiilada sanka. Maaddada dusha sare waa maro spunbonded polypropylene, walxaha lakabka dhexe waa polypropylene dhalaalaysa-afuufay maro filter ka samaysan polypropylene spinneret, alaabta hoose waa maro spunbonded polypropylene, suunka maaskaro waxaa lagu toleeyey by dun polyester iyo qadar yar oo dun spandex ah, iyo duubka sanku wuxuu ka samaysan yahay polypropylene oo la foorarsan karo oo qaabaysan karo.
Maaskarada Xariirta suufka ah ee Laastikada ah waxay ka kooban tahay lakabka sare, lakabka dhexe, lakabka hoose, suunka maaskaro iyo fiilada sanka. Maaddada dusha sare waa maro spunbonded polypropylene, walxaha lakabka dhexe waa polypropylene dhalaalaysa-afuufay maro filter ka samaysan polypropylene spinneret, alaabta hoose waa maro spunbonded polypropylene, suunka maaskaro waxaa lagu toleeyey by dun polyester iyo qadar yar oo dun spandex ah, iyo duubka sanku wuxuu ka samaysan yahay polypropylene oo la foorarsan karo oo qaabaysan karo.
Maaskarada Saddex-geesoodka ah ee Barafka waxa ay ka kooban tahay lakabka sare, lakabka dhexe, lakabka hoose, suunka maaskaro iyo fiilada sanka. Maaddada dusha sare waa maro spunbonded polypropylene, walxaha lakabka dhexe waa polypropylene dhalaalaysa-afuufay maro filter ka samaysan polypropylene spinneret, alaabta hoose waa maro spunbonded polypropylene, suunka maaskaro waxaa lagu toleeyey by dun polyester iyo qadar yar oo dun spandex ah, iyo duubka sanku wuxuu ka samaysan yahay polypropylene oo la foorarsan karo oo qaabaysan karo.
Maaskarada Saddex-geesoodka ah waxay ka kooban tahay lakabka sare, lakabka dhexe, lakabka hoose, suunka maaskaro iyo fiilada sanka. Maaddada dusha sare waa maro spunbonded polypropylene, walxaha lakabka dhexe waa polypropylene dhalaalaysa-afuufay maro filter ka samaysan polypropylene spinneret, alaabta hoose waa maro spunbonded polypropylene, suunka maaskaro waxaa lagu toleeyey by dun polyester iyo qadar yar oo dun spandex ah, iyo duubka sanku wuxuu ka samaysan yahay polypropylene oo la foorarsan karo oo qaabaysan karo.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Maaskaro la tuuri karo oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Maaskaro la tuuri karo soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Maaskaro la tuuri karo la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.